Avanafil (330784-47-9) Fekitori yevanogadzira fekitori
Avanafil inoshandiswa kubata erectile dysfunction (ED: kusasimba; kutadza kuwana kana kuchengeta erection mune varume). Avanafil iri mukirasi yemishonga inonzi phosphodiesterase (PDE) inhibitors. Izvo zvinoshanda nekuwedzera kuyerera kweropa kuenda kune penis panguva yekuita zvepabonde. Uku kuwedzerwa kweropa kuyerera kunogona kukonzera erection. Avanafil hairape erectile dysfunction kana kuwedzera chishuwo chebonde. Avanafil haidzivirire kuita nhumbu kana kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa senge hutachiona hwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona (hutachiona hweHIV, hepatitis B, gonorrhea, syphilis) .Kuti udzikise njodzi yako yekutapukirwa, gara uchishandisa nzira inobudirira yekudzivirira (latex kana polyurethane kondomu / madhiri emeno) panguva yese yebonde. Bata chiremba wako kana wemafakitisi kuti uwane mamwe mashoko.
Avanafil poda Base Ruzivo
zita Avanafil powder
Molecular Weight 483.95g / mol
Waizviziva here kuti vanopfuura mamirioni makumi matatu varume muUnited States vane erectile dysfunction (ED)? Izvi zvinotsanangura kuti nei paine mishonga yakawanda yeEED inotengeswa muUS. Mumwe wakadai mushonga ndivanavanafil. Stendra ndiye avanafil zita rezita kuti iwe ungangoziva.
Avanafil (Stendra) iri PDE-5 (phosphodiesterase-mhando 5) inhibitor inodzivirira PDE-5.
Paunotora mushonga uyu, unozorodza mimwe mitsipa yeropa uye mhasuru mumuviri wako kuti ikubatsire kuwana erection nekuwedzera kuyerera kweropa kunhengo yako. Neichi chikonzero, iyo inoshandiswa kurapa erectile dysfunction (ED). Kunge Levitra® (vardenafil), Cialis® (tadalafil), uye Viagra® (sildenafil), avanafil ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti umise uye chengetedza iyo erection kwenguva yakati.
Avanafil (Stendra®) iri nyowani, ichigadziriswa muma 2000s neMitsubishi Tanabe Pharma kuJapan. IUnited States Chikafu neDrug Administration (FDA) yakabvumidza mushonga muna Kubvumbi 2012 kurapwa kweEED, nepo European Medicines Agency (EMA) yakabvuma muna Chikumi 2013.
Kubva kune vakawanda avanafil wongororo, iwe uchaona kuti ine mashoma mhedzisiro mhedzisiro kana ichienzaniswa neLevitra, Cialis, Viagra, uye mimwe mishonga yeED.
Ngaticherei zvakadzika uye tizive zvakawanda nezve ichi chinodhaka.
Maitiro Avanafil Anobata Erectile Dysfunction
Avanafil inoshandiswa kurapa ED kana kushaya simba, izvo zvinotsanangurwa sekutadza kuwana nekuchengetedza erection. Avanafil inowira muchikamu chemishonga inodzvinyirira phosphodiesterase.
Ziva kuti iwe kuti uwane erection, yako penile tsinga dzeropa dzinozadzwa neropa. Izvi zvinoitika kana aya masero emidziyo yeropa achiwedzera, nokudaro achiendesa rimwe ropa kunhengo yako yemurume. Panguva imwecheteyo, kukura kwemitsipa yeropa inobvisa ropa kubva panhengo yako yemurume kunozodzikira nekudaro kuve nechokwadi chekuti ropa rinogara zvakanyanya mumatumbu ako epenile, nekudaro uchitsigira kumisikidzwa kwenguva refu.
Paunenge uchikurudzirwa pabonde, iwe unofanirwa kuwana erection. Iyi erection ichaita kuti peni yako isunungure nitric oxide, chinhu chinokonzeresa guanylate cyclase (enzyme) kuburitsa cGMP (cyclic guanosine monophosphate), yakakosha intracellular messenger iyo inodzora mazhinji maitiro ehupenyu.
Chaizvoizvo, iyi cyclic nucleotide ndiyo inokonzeresa kuzorora nekudzvinyirira tsinga dzeropa dzinotakura ropa kubva uye kuenda kunhengo yechirume kukonzeresa kusimuka. Kana imwe enzyme ikaparadza cGMP, tsinga dzeropa dzinozowana hukuru hwadzo hwepakutanga zvichikonzera ropa kusiya nhengo yemurume, uye izvi zvinoratidza kupera kwekusimuka.
Paunotora avanafil, inozomisa PDE-5 kubva mukuparadza cGMP, zvichireva kuti cGMP ichagara kwenguva yakareba uye inosimudzira yako erection. Iyo yakareba iyo cGMP ichigara, iyo yakareba iyo ropa ichagara munhengo yako yemurume uye iyo yakareba iyo yako erection inotora
Is Avanafil (Stendra) Inobudirira Kurapa Erectile Dysfunction?
Kunyangwe avanafil (Stendra) iri mishonga nyowani yeED, zvidzidzo zvakawanda zvinoratidza kushanda kwayo mukurapa kweED. Mune zvimwe zvidzidzo zvishanu zvakaitwa mugore ra2014 kutsvaga kana mushonga uyu uchishanda, vanopfuura varume mazana maviri nemazana maviri vakapinda muchikamu ichi, uye vese vaive nehutachiona hwekusagadzikana.
Pakupera kwezvidzidzo, avanafil yakawanikwa ichibudirira kwazvo mukuvandudza iyo IIEF-EF, indekisi yepasi rose inoshandiswa kuongorora matambudziko ane chekuita nekumiswa.
Varume vese vakatora chinodhaka ichi vakaratidza kunatsurudzwa mune yavo IIEF-EF pamadhivhosi anotangira pa50 kusvika 200mg. Mhedzisiro yekutsvaga yakaratidzawo kuti avanafil yainyanya kushanda pamadhivhosi epamusoro e200mg. Izvi zvinosiyanisa avanafil kubva kune mamwe madhiragi eD anokonzeresa mhedzisiro padanho repamusoro.
Mune kumwe kuongorora kwakaitwa mu2012, avanafil yakawanikwa ichibvumidzwa zvakanaka uye inoshanda kwazvo pakurapa kweED. Vaviri vevarume vakatora chikamu muchidzidzo vakaratidza kuvandudzika kunoshamisa pamadhora ari pakati pe100 kusvika 200mg.
Mumakiriniki miedzo inosanganisira avanafil, vaongorori vakashuma kuti inoratidza huwandu hwakakosha mukukosha mune zvese zvine hukama nehutano hweEED. Iyi miedzo yaisanganisira vanopfuura mazana matanhatu evarume mune zera bracket re600 - 23.
Muchidimbu, avanafil inoshanda mukurapa kweED. Tsvakurudzo dzinoverengeka dzakaratidza kuti inogona kuburitsa kuyerwa uye kwakakosha kuvandudza kwevarume vese vane ED, zvisinei nezera ravo.
Ndezvipi zvirinani Avanafil kana Tadalafil?
Avanafil ndiyo ichangoburwa ED mushonga pamusika, asi inoita zvirinani kupfuura mazhinji ekare mishonga yeED. Ose ari maviri Avanafil kana Tadalafil anoshandiswa kurapa kusagadzikana kwe erectile, asi ivo vane misiyano mune yavo maitiro ekuita.
Ipo tadalafil (Cialis) iri mushonga unoshanda kune ese akawedzera prostate uye erectile kudzvinyirira zviratidzo, Stendra kazhinji ndiyo sarudzo yekutanga kune avo vane erectile dysfunction.
Avanafil vs Tadalafil: Ndeipi inoshanda nekukurumidza?
Tadalafil uye imwe yekutanga-chizvarwa erectile kusagadzikana zvinodhaka zvinotora pakati pemaminitsi makumi matatu kusvika paawa imwe kuti zvavanoita zvinzwike. Uye mune dzimwe nguva, mushure mekunge wadya chimwe chinhu chinorema, mishonga yacho inogona kutora inopfuura awa imwe kuti itange kushanda. Izvi hazvisizvo nezvevanavanafil.
Kana iwe ukatora pakati pe100 - 200mg yechigadzirwa, iwe unonzwa iyo avanafil mhedzisiro mukati memaminitsi gumi nemashanu. Kureva kuti iwe unogona kuzvitora maminetsi mashoma usati watanga kuita bonde. Kunyangwe iwe ukatora dosi yakaderera yeavanafil, iti 15mg, iwe uchazowana erection mukati memaminitsi makumi matatu.
Avanafil vs Tadalafil: Ndeupi ane mashoma Mashoma Mhedzisiro?
Kunyangwe avanafil ine mimwe mhedzisiro, iyi mhedzisiro haina kuwanda seiya ye tadalafil. Iyo avanafil mhedzisiro zvakare haina kushata senge yea tadalafil. Semuenzaniso, avanafil haigone kukonzera yakaderera BP uye kusaona zvakanaka; iyo miviri mhedzisiro inosangana ne tadalafil uye imwe mishonga yeED.
Imwe mukana weavanafil ndeyekuti inogona kutorwa pamadosi epamusoro pasina kukonzera chero mhedzisiro. Muchokwadi, madosi epamusoro anosvika ku200mg anogona kutorwa pasina kunetseka nezve chero mhedzisiro.
Avanafil inoshanda zvakasiyana ne tadalafil nekuti inovavarira iyo phosphodiesterase-mhando 5 enzyme, pasina kurwisa mamwe phosphodiesterase enzymes senge PDE11, PDE6, PDE3, uye PDE1.
Avanafil Haibatwe neKudya.
Tadalafil uye imwe yekutanga-chizvarwa erectile kusagadzikana mishonga kazhinji kashoma kushanda mushure mekudya kudya kukuru kwezvikafu zvine mafuta akawanda. Izvi zvinoita kuti zvive chinetso chikuru kuvashandisa sezvo iwe uchifanira kuongorora yako yekudya nguva uye zvakare kuva nehanya nezve izvo iwe zvaunodya.
Kune rimwe divi, avanafil haina kukanganiswa nechikafu chakadyiwa, zvichireva kuti uchafarira avanafil mhedzisiro zvisinei kuti inguva yaunodya uye zvaunodya. Nechikonzero ichi, zvirinani kuti utye zvekudya zvine simba usati washandisa mushonga uyu kuti uve nesimba rakakwana pakuita bonde.
Avanafil vs Tadalafil: Ndeipi inogona kushandiswa nedoro?
Zvinokurudzirwa kudzikisira kana kunwa doro kana uri pane tadalafil mishonga. Tadalafil inozivikanwa kudzikisira kukwira kweropa, saka kuitora pamwe nedoro kunogona kuwedzera kudzikisira kweropa kusvika kumazinga akaomarara.
Kutora ichi chinwiwa nedoro kunoenderana nezviratidzo zvakaita sekurova kwemoyo, kutemwa nemusoro, kumhanya, kupera simba, huremu husina musoro, uye dzungu. Kune rimwe divi, Stendra yakachengeteka kushandisa, kunyangwe mushure mekunwa doro. Unogona kunakirwa kusvika kumatatu ekunwa doro usati watora Stendra, uye hakuzovi nemimwe mhedzisiro uye chero njodzi pahutano hwako.
Nekudaro, izvi hazvireve kuti iwe unogona kuenda kunwiwa wobva washandisa Stendra. Iwe unofanirwa kushandisa doro zvine mwero sezvo doro pacharo rinokonzeresa mamwe matambudziko ehutano. Doro rinonyaradza, uye kana iwe ukarishandisa rakawandisa, rinodzora chishuwo chako chepabonde uye chichiita kuti zviome kuti iwe uwane erection. Zvinoreva kuti doro rinorega izvo mishonga yeED kuronga kuitisa.
Sezvinoonekwa, avanafil ine akati wandei mabhenefiti pamusoro tadalafil. Ndicho chikonzero nei varapi vazhinji vachida kuinyorera ivo varwere.
Zvinoitwa Nezvimwe Zvinodhaka Bata Avanafil?
Nepo mimwe mishonga isingakwanise kushandiswa mukubatana, mimwe inogona kusanganiswa kuwedzera kushanda kwayo. Zvinodhaka zvisingakwanise kusanganiswa ndezvi zvinopindirana uye zvinokonzeresa zvakashata. Ndokusaka usati waiswa pamushonga chero upi zvawo, ita kuti iwe uzive kana iwe uchitova pane mumwe mushonga. Izvi zvinofanirwawo kunge zviri izvo kana iwe uchida kuchinja zvinodhaka kana kuyerwa. Usaite chero chinhu chako pasina kubatanidza mupi wezvehutano.
Semuenzaniso, iwe unorayirwa zvakasimba kuti usashandise avanafil pamwe chete nemishonga yakadai seLevitra, Staxyn (vardenafil), tadalafil (Cialis), kana Viagra (sildenafil). Iyi mishonga inoshandiswawo kurapa ED uye arterial hypertension (pulmonary). Saka kuvashandisa pamwe neavanafil kunogona kuzadza muviri wako uye kukonzeresa zvakakomba mhedzisiro.
Usati watanga kushandisa avanafil, rega mupi wako wehutano azive kana uri kutora chero mimwe mishonga, kunyanya:
Iyo mishonga inoshandiswa kurapa kusagadzikana kwe erectile.
Chero mishonga inorwisa mabhakitiriya senge telithromycin, erythromycin, clarithromycin, nevamwe
All antifungal zvinodhaka, pakati pavo ketoconazole, itraconazole, nevamwe
Chero chipi chinodhaka chinoshandiswa pakurapa chirwere cheprostate kana kukwirisa kweropa, kusanganisira tamsulosin, terazosin, silodosin, prazosin, doxazosin, alfuzosin, nevamwe.
Hepatitis C zvinodhaka se telaprevir uye boceprevir nevamwe.
Mishonga yeHIV / AIDS yakadai saquinavir, ritonavir, indinavir, atazanavir, nevamwe.
Aya mazita ari pamusoro apa haana kumbobvira akazara. Kune mimwe mishonga yakaita saDoxazosin naTamsulosin iyo painoshandiswa pamwechete neAvanafil inoguma nemhedzisiro. Pamusoro pezvo, akawanda akawanda pamusoro peiyo-the-counter uye mishonga yemishonga inogona kusangana neAvanafil. Izvi zvinosanganisira mishonga yemakwenzi uye mavitamini. Chinokosha ndechekuti usashandise chero mushonga pamwe chete neAvanafil pasina ruzivo rwechiremba wako.
Haisi chete mishonga yaunofanirwa kungwarira nezvayo, asi iwe unofanirwa zvakare kuve wakangwarira kana iwe uine zvimwe zviri pasi pehutano mamiriro. Saka usati washandisa avanafil, ita chiremba wako azive kana iwe uine chero eanotevera matambudziko ezvehutano.
Urume husina kujairika - kana uine mboro yakakombama kana nhengo yako ine hurema hwekuzvara, pane mikana yakakura yekuti hutano hwako hungakanganiswa kana ukashandisa avanafil.
Kana iwe uine makore makumi mashanu ekuberekwa kana kupfuura
Kana iwe uri kutambura neyakaunganidzwa disc, coronary artery chirwere, kana maziso ako ane yakaderera mukombe-ku-disc chiyero, uye kana iwe uri kutambura nechirwere chemwoyo kana chirwere cheshuga, akakwira-mafuta mazinga muropa (Hyperlipidemia) kana yakakwira ropa kumanikidza (neBP).
Mimwe mamiriro ezvinhu aunofanirwa kuendesa kuna chiremba wako anosanganisira:
Matambudziko akakura eziso
Kurwadziwa kwepfupa (angina)
Kusajairika kurova kwemoyo (arrhythmia)
Matambudziko nemidziyo yeropa senge idiopathic subaortic stenosis kana aortic stenosis
Kurwara kwemoyo kwakaitika mukati memwedzi mitanhatu yekupedzisira.
Stroke mukati memwedzi mitanhatu yekupedzisira
Kenza inoenderana neropa (leukemia kana yakawanda myeloma)
Sickle-cell anemia, pakati pevamwe
PDE5 inhibitors, Stendra inosanganisirwa, inobatana nevamwe CYP3A4 inhibitors uye alpha-blockers. Neichi chikonzero, zvakakosha kuti chiremba wako azive kana iwe uri kushandisa iyi mishonga. Pakazara, avanafil chigadzirwa chinoshanda uye chakachengeteka chekurapa ED.
Avanafil inonyanya kushandiswa kurapa kusagadzikana kwe erectile. Mamwe mabhenefiti eanavanafil anosanganisira chokwadi chekuti chinoshanda nekukurumidza kupfuura mimwe mishonga yese inoshandiswa pakurapwa kweED. Unogona kuitora maminetsi gumi neshanu usati waita bonde uye icharamba ichishanda.
Imwe mukana weavanafil ndeyekuti haufanire kuitora zuva nezuva kuti ubudirire, unogona kuitora sey uye kana paunenge uchida. Avanafil inoregererwa nemuviri uye inogona kutorwa pamwe kana pasina chikafu. Avanafil haina yakawanda mhedzisiro semimwe mishonga yeED, uye iwe unogona zvakare kuitora mushure mekunwa doro.
Kurapa kweED ingori imwe yeiyo avanafil inoshandisa. Ichi chigadzirwa chinoshandiswawo pakurapa chiitiko chaRaynaud, chirwere chinoguma mune chimwe chikamu chemuviri chinonzwa kutonhora uye chiveve. Zvakaitika naRaynaud zvinoitika kana paine kuderera kweropa kuyerera kune chikamu chemuviri, senge mhino, mabvi, minyatso, zvigunwe, uye nzeve. Aya mamiriro anokonzeresawo shanduko paganda reganda.
Maitiro Ekubatsira Zvakawanda Kubva kuAvanafil
Avanafil ichakubatsira iwe kuwana erection, asi izvo hazvireve kuti iwe unogona kubvisa kumberi. Saka usati waita bonde, bata mumwe wako mukutungamira sezvaungadai wakaita pasina kunwa mushonga. Rangarira kuti avanafil inongokubatsira iwe kuwana erection kana iwe wamutswa pabonde.
Usanwa doro rakawanda usati washandisa avanafil. Doro rakawandisa rinogona kukutadzisa kunakidzwa neavanafil mhedzisiro. Kubatanidza doro uye avanafil kunogona kukonzera mhedzisiro senge dzungu rinozodzikisira bonde rako rekuita uye kuita.
Dzivisa kunwa muto wemazambiringa mukati memaawa makumi maviri nemana aunoronga kutora avanafil uye pabonde. Jisi remuzambiringa rine mamwe makemikari anowedzera avanafil mazinga muropa rako nekudaro uchiwedzera mikana yekuona mamwe mhedzisiro.
Kudza nguva dzawakagadzwa pamwe nemupi wezvehutano kuitira kuti agone kuongorora kufambira mberi kwako. Kana iwe ukatadza kuwana erection kunyangwe mushure mekutora avanafil uye kuita foreplay, kana kana iwe ukawana erection, asi haigare kwenguva yakareba zvakakwana kuti uite bonde uye usvike kune orgasm, unofanirwa kuzivisa chiremba wako.
Izvi zvinoshandawo kana avanafil ichiita kunge ine simba kwazvo kwauri; apo kumisikidzwa kwako kuchiratidzika kunge kusiri kupera mushure mekupedza kuita bonde. Rega chiremba wako azive pamusoro peizvi kuitira kuti agone kuderedza muyero wako. Zvakare, yeuka kusatora yakawanda avanafil pane izvo zvinorairwa nachiremba wako.
Uchishandisa Avanafil (Stendra)
Kuti avanafil ibudirire, zvaizobatsira kana iwe ukaitora sekurairwa nachiremba wako. Chiremba anokuudza kuti ingani yekutora uye nenguva dzipi.
Kungofanana nemimwe mishonga yekusavhiringidza, avanafil iri nyore kushandisa. Mushonga unouya upfu kana piritsi fomu. Sezvo avanafil inoshanda nekukurumidza, unofanirwa kuitora pakati pe15 - 30 maminetsi usati waita bonde. Kana chiremba wako akakunyorera dosi yakaderera yevanavanafil, iti 50mg pazuva, zvinokurudzirwa kuti utore mushonga kwete pasi pemaminitsi makumi matatu usati waita bonde. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuona kuti muviri wako unotora zvakakwana mushonga. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iwe unogona kutora avanafil powder kana uine nzara haizove neyakaipa mitezo pamuviri wako.
Zvinokurudzirwa kuti utore mushonga uyu kamwe chete pazuva. Wako wekuchengeta hutano anoongorora maitiro anoita muviri wako kumushonga uye anogona kugadzirisa dhizaini iwe kuti uwane iyo yakazara avanafil mabhenefiti.
Kuva mushonga wekurapa, uchafanirwa kutaura nachiremba wako kuti akupe mushonga usati avanafil buy. Chiremba achakubvunza mibvunzo yakati wandei uye, kana zvichibvira, ita bvunzo kuti ubatsire kuona kuti ndeipi avanafil dosi yakakukodzera iwe zvichienderana neyako mukuru utano, zera, uye mimwe mishonga yaungave uri kushandisa. Namatira kune iyo avanafil inoshandisa zvinoenderana neruzivo pane chigadzirwa chigadzirwa kana sezvakaratidzwa nachiremba wako. Rangarira kuti avanafil hairape mamiriro ekurapa kunze kweED uye zvaRaynaud.
Avanafil inowanikwa mumasimba matatu akasiyana: 50, 100, uye 200mg. Izvo zvinonyanya kuitika kuti chiremba wako anokutanga iwe pane iyo 100mg simba, asi anogona kuchinja chipimo chemushonga zvichienderana nekuti muviri wako unopindura sei. Nguva imwe neimwe paunotenga avanafil powder, tarisa chinyorwa kuti uone kuti une simba chairo rawakanyorerwa iwe.
Kuongororwa kweED kunofanira kusanganisira kuongororwa kwakazara kwechiremba kuti uone kana paine zvikonzero, uyezve kuona dzimwe nzira dzekurapa. Semuenzaniso, mubatanidzwa wezvinhu zvepfungwa uye zvepanyama zvinogona kukonzera ED.
Mimwe mamiriro epanyama anononoka kuita bonde zvichikonzera kusagadzikana kunogona kukanganisa kuita bonde. Kana zvinhu izvi zvikarapwa, iko kwekusangana pabonde kunogona kudzoserwa Zvinowanzoitika zvikonzero zveED zvinosanganisira:
Atherosclerosis (yakavharwa tsinga dzeropa)
Metabolic syndrome - Iyi ndiyo mamiriro mune kuwedzera kweropa, insulin, cholesterol, uye mafuta emuviri.
Chirwere chePeyronie - kana nyama tsvuku ichikura munhengo yemurume
Kudhakwa uye kushandisa zvinodhaka / zvinodhaka
Kukuvara kana kuvhiyiwa mumuzongoza kana nharaunda
Kurapa kweakawedzera prostate kana kenza yeprostate
Uropi hunoita basa rakakura mukumutsa bonde. Zvinhu zvakati wandei zvinokanganisa kukurudzira pabonde zvinotanga kubva muuropi. Izvo zvikonzero zvepfungwa zveED zvinosanganisira:
Kuzvidya mwoyo, kushushikana, kana mamwe mamiriro anokanganisa pfungwa utano
Matambudziko ehukama anokonzerwa nekusataurirana zvakanaka, kushushikana, kana zvimwe zvinonetsa
Hupenyu husingagutsi hwepabonde
kuzvitarisira pasi kana kunyara kana
Iko kusakwanisa kuisa mumwe wako nhumbu
Pamberi pekuti mupi wezvehutano akuraira avanafil kwauri, haangotarise chete nyaya dziri pamusoro, asiwo zvinotevera:
Kana iwe uine pre-iripo yemoyo mamiriro, iwe unogona kuve nenjodzi yemoyo kana iwe uchiita bonde. Nechikonzero ichi, erectile kudzvinyirira kurapwa uchishandisa avanafil haina kukurudzirwa kune avo vane mamiriro epasi pemwoyo.
Varwere vane ma ventricle ekuruboshwe akavharidzirwa kana avo vane hutachiona hwekuzvidzivirira kweropa vanogona kubata Stendra nevamwe vasodilator.
Vamwe vashandisi ve PDE5 vakashuma erection inogara kweanopfuura maawa mana. Vamwe zvakare vakashuma marwadzo emarwadzo ayo anogara kweanopfuura maawa matanhatu (priapism). Kana iwe ukasangana nechero cheaya mamiriro, iwe unofanirwa kutsvaga kurapwa nekukurumidza. Izvi zvinodaro nekuti yako penile tishu inogona kukuvara kana iwe ukanonoka uye iwe unogona kurasikirwa nehukama hwako zvachose.
Varwere vane penile anatomical deformations (Peyronie's disease, angulation, kana angulation) vanofanirwa kushandisa avanafil nekungwarira kwakawanda. Saizvozvowo, ivo varwere vane mamiriro anogona kukonzeresa kufungidzira vanofanirawo kungwarira pavanoshandisa avanafil.
Kana iwe ukawana kurasikirwa kwekuona panguva yekushandisa Stendra kana chero imwe PDE5 inhibitors, iwe unofanirwa kuzivisa chiremba wako nekukurumidza sezvazvinogona kuti ugamuchire kurapwa kwakakodzera.
Chiratidzo kurasikirwa kunogona kuva chiratidzo che NAION, mamiriro anoitika kune vamwe vanhu vanoshandisa PDE5 inhibitors. Kubva kune vakawanda avanafil wongororo, iwe unozoona kuti ichi chiitiko chisingawanzoitika, asi iwe unofanirwa kuzviziva.
Ichi chimwe chiitiko chisingawanzo sanganisike ne PDE5 inhibitors. Kana iwe uri kushandisa avanafil uye iwe ukasangana nekukasika kurasikirwa kana kuderera kwekunzwa, yambira chiremba wako nekukurumidza sezvazvinogona. Kurasikirwa kwekunzwa kunowanzo kuperekedzwa nedzungu kana tinnitus, asi hazvisi pachena kuti izvi zviratidzo zvinofanirwa kubva kuP PDE5 inhibitors.
Zviri pamusoro pechiremba kuona chaicho chinokonzera zviratidzo izvi, asi kana ukazviona, zvinobatsira kana ukamira kutora avanafil kusvikira wawana kuongororwa kwakakodzera kubva kuna chiremba.
Avanafil Side Mhedzisiro
Stendra ari ngozi, mushonga unoshanda uyo unongova nemhedzisiro mishoma, hapana imwe yadzo yakajairika. Semuenzaniso, kutemwa nemusoro, iyo yakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeStendra, inongokanganisa mashanu kusvika gumi muzana evarume vanoshandisa mushonga.
Imwe yakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeAvanafil iri kupukuta Kubva pakuongorora kwevanavanafil, zvakaonekwa kuti mamiriro aya anoitika pakati pe3 - 4% yevashandisi. Kutemwa nemusoro uye kupukutika kunoguma kwaitika kubva paAvanafil pakubuda kweropa uye izvi zvinowanzoitika zvinopera mushure memamwe maawa. Zvimwe zvinokonzeresa avanafil mhedzisiro zvinosanganisira kuzara kwemhino, zviratidzo zvinotonhora (nasopharyngitis), uye kurwadziwa musana. Zvese izvi avanafil mhedzisiro zvinoitika mune diki muzana revashandisi.
Unoda here tenga avanafil? Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kusarudza anovimbika avanafil mutengesi uyo anogona kukuvimbisa iwe kuti iyo avanafil powder yauri kutenga ndeyeyemhando yepamusoro. Isu takadaro mutengesi. Isu tinowana zvigadzirwa zvedu zvakananga kubva kuCMOAPI, inozivikanwa inozivikanwa inogadzira avanafil.
CMOAPI inogadzira kwete chete avanafil asiwo mamwe erectile dysfunction zvinodhaka. Usatombo kunetseka nezve avanafil mutengo. Tinoda kubatana newe kukupa iwe avanafil kwemakore mazhinji. Ndosaka mutengo wedu weAvanafil uri wehomwe kwazvo.
"FDA inobvumidza Stendra ye erectile dysfunction" (Press kuburitswa). Kudya neDrug Administration (FDA). Kubvumbi 27, 2012.
"Spedra (avanafil)". European Medicines Agency. Yakadzorerwa 17 Kubvumbi 2014.
US 6797709, Yamada K, Matsuki K, Omori K Kikkawa K, "Inonhuhwirira senitrogen-ine 6-membered cyclic macomplic", yakaburitswa 11 Zvita 2003, yakapihwa Tanabe Seiyaku Co
"VIVUS Inozivisa Avanafil Kudyidzana naMenarini". Vivus Inc. Yakachengetedzwa kubva kune yekutanga pane 2015-12-08.
"VIVUS neMetuchen Pharmaceuticals Vazivisa Chibvumirano cheRisense cheKodzero dzekutengesa ku STENDRA". Vivus Inc. 3 Gumiguru 2016.